हिमाल खबरपत्रिका | प्रधानमन्त्रीज्यू अब आराम गर्नुस्
प्रधानमन्त्रीज्यू अब आराम गर्नुस्
‘प्रमको स्वास्थ्यः चिन्ता र चासो’ (१५–२१ भदौ) आवरण रिपोर्ट सान्दर्भिक छ । विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति हुँदा समेत देशको उच्च पदमा रहेर धपेडी गर्नु उचित होइन । यो त पार्टीलाई निर्देशन दिने र आराम गरेर बस्ने समय हो । दोस्रो पुस्तालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सहयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसले प्रम ओलीको ओज अझै बढाउँछ । यस्तो कदमले ओलीलाई नेकपाको सर्वमान्य नेता बन्न सघाउनेछ ।
सत्तामा पुगेका बेला नजिकको बनेर फाइदा लिन पल्केका ‘केही’ सीमितलाई यस्तो सल्लाह नपच्न सक्छ । तिनीहरू ओलीको स्वास्थ्यको लागि होइन, आफ्नो ‘स्वार्थसिद्ध’ गर्न चाहनेहरू हुन् । पछिल्लो समय प्रमको स्वास्थ्य अवस्था गुपचुप राख्ने प्रयत्न गरियो । यस्तो किन गरियो ? के प्रमको स्वास्थ्य नेकपाको मात्र चासो हो ? होइन । त्यसैले आउँदा दिनमा प्रमबारे सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ ।
विभुचन्द्र कायस्थ, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति विमलेन्द्र निधिको ‘बीपीले अघि सारेको समाजवाद पुनः परिभाषित गर्ने वेला भइसक्यो’ (१५–२१ भदौ) अन्तर्वार्ता कांग्रेस पार्टीको उत्थानका लागि अचूक मन्त्र हो । अब पनि ‘बीपी’, ‘विराटनगर’ र ‘कोइराला परिवार’ भनेर बस्ने हो भने कांग्रेस अझ भासिन्छ । नेकाका कार्यकर्तादेखि शुभचिन्तकहरूले पार्टीको लक्ष्य र विचारलाई गहन तवरले चिन्तन गर्ने वेला नै यही हो । अब कांग्रेस बीपीको समाजवाद, हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र कुनै मुद्दाले पनि बौरिनेवाला छैन । मूर्झएको कांग्रेसलाई जागरुक बनाउन आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नागरिकका जल्दाबल्दा मुद्दा नै अघि सार्नुपर्छ ।
विदुर कार्की, उदयपुर, कटारी
अटेरी सरकारी संयन्त्र
जातीय विभेद सम्बन्धी रिपोर्ट ‘दलितमाथि सरकारकै छुवाछूत’ (१५–२१ भदौ) ले वर्षौंदेखि समाजमा व्याप्त कुरीति विरुद्ध सशक्त कदम चाल्न अटेर गरिरहेका सरकारी संयन्त्रलाई दह्रैसँग झकझक्याए को छ । समाजमा विभेद हुन नदिन र दलितको उत्थान गर्न समग्र समुदायलाई शिक्षित र सचेत बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसले पछाडि परेका हरेक समुदायको चेतना स्तर बढ्छ ।
उनीहरूलाई आय आर्जनका नयाँ बाटाहरू खोजी गर्न पनि प्रेरित गर्छ । अनि विस्तारै सार्वजनिक सेवा र सरकारी संयन्त्रमा पहुँच स्थापित हुनेछ । विभेद गर्न/गराउन वा हुन दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ ।
यसो हुन सक्यो भने छुवाछूतको मात्रा स्वतः घट्दै र हराउँदै जानेछ । राज्यले त कानून बनाउने हो तर समाज नै सचेत नभएमा भने कानून कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, विभेदरहित तवरले सार्वजनिक सेवामा पहुँच पुर्याउन विशेष ध्यान दिने हो भने अरू कुरा स्वतः समाधान हुनेछन् ।
आशा विक, पोखरा
दफा १८५ खारेज हुनुपर्छ
‘आत्महत्याको दुरुत्साहनः विधिशास्त्रीय समीक्षा’ (१५–२१ भदौ) ले आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसरी अपराध मानियो र नेपालको कानूनमा कसरी भित्रियो भन्ने सन्दर्भ उठाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको विकास २०१३ सालदेखि शुरू भई २०३१ सालमा पहिलो पटक साल नराखी ‘अपराध संहिता २०... मस्यौदा’ प्रकाशित भएको थियो । जनताको राय माग्न शाही कानून आयोगले प्रकाशित गरेको सो संहिताकरण अभियान २०५५ सम्म त्यतिकै रह्यो । २०५६ सालमा तत्कालीन कानून मन्त्रालयले यसको मस्यौदा पुनर्लेखनको काम अगाडि बढायो । २०५८ सालमा यसको पहिलो पुनर्लिखित मस्यौदा आउँदासम्म आत्महत्याको दुरुत्साहनले यसमा प्रवेश पाएको थिएन ।
सरकारले २०६४ सालमा देवानी र फौजदारी संहिताको पुनर्लेखनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कार्यदलहरू बनायो । ती कार्यदलले विशेषगरी जापान र अन्य केही मुलुक भ्रमण गरे । सोही कार्यदलले कहींको नक्कल गर्दै तत्कालीन मस्यौदाको दफा १८७ मा समावेश गर्यो । मस्यौदाउपर सरकारी तहमा औपचारिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेको कार्यदलको मस्यौदालाई कुनै सरकारी अधिकारीले चुनौती दिने कुरै थिएन । त्यो त्यत्तिकै विधेयकको मस्यौदामा समावेश हुँदै संसदबाट पनि विना विवेचना पारित भयो ।
वास्तवमा अपराध संहिताको दफा १८५ मा रहेको प्रावधान नेपाली समाजका लागि हितकर छैन, यसलाई जतिसक्दो चाँडो खारेज नै गर्नुपर्छ ।
पवन भट्टराई, कानूनको विद्यार्थी, भोजपुर